Ndiri kuchata muna December but ndirikutya kusvirwa - Nhau Dzevakuru
Nhau DzeBondeTete Vee - September 17, 2020
Nhau DzeBondeMax - August 15, 2019
Nhau DzeBondeTete Vee - June 22, 2019
Pakusvirana mboro yemurume inopinda yese here kana kuti chidimbu chete? Ndiri kuchata muna December but ndirikutya kusvirwa asi hapana mukana wekusaita.
Mboro yemurume ine saizi unobva pa 12 cm kusvika pa 20cm kureba zvichibva nekuti ndiani murume wako. Kukora kana tichitarisa sekusunga belt inoita 10m kushika pa 14 cm
Mukadzi kana asina zemo akadzika 8cm kusvika pa 10 cm, kana ava nezemo anotatamuka zvekukwanisa kupinzwa mboro kuru yakakobvuka pasina kana chinotyisa. Ingonzwisisa kuti unofanira kutanga wanyorova zvekunyanya kunyorova. Zvadaro musi wekutanga rara nemanhede wovhura makumbo murume oyenda pakati pemakumbo wopinza mboro. Pamwe hafu yacho ndiyo chete inopinda kuti mboro yese ipinde unenge watosimudzira chiuno.
Kureba kwemboro hakuna chinotyisa inokwana mukati mebeche chete. Kukora ndiko kwaunonzwa kunakirwa nako nekuti kunokutatamura mukova. Zvinonaka kupfuura kugofiwa nekureba kwemboro.
Kana uri mhandara uchanzwa paanotanga kupinza unobvaruka chivharo zvoita sewabaiwa netsoni asi kanguva kadikidiki zvatopera watova kubatirira murume motosvirana nyaya yatopera, kubva ipapo watori mukadzi wemunhu. Mazuva ekutanga hazvinyanyi kunaka asi unenge uchifarira kuiswa zvekuti. Asi zvichawedzera kunaka kana wajairira uye dzidza kurerutsa muviri pakuiswa kuti zviwedzere kunaka.
Asi iwe wega tanga wanzwisisa kuti murume wako anofanira kukupinza mboro papi pacho. Kune vakadzi vakawanda vasingazvitarisi beche ravo, tora mirror uise pasi wakatanyanga wozvivhura matinji uchiona pachazopindwa nemboro.
Previous articleNdingaita sei kuti murume wangu anakirwe pabonde?
Next articleKamorning glory: Mazvamburiro andakaita babe rangu nemboro
Ask TeteTete Vee - June 24, 2021
Makadii vadikani mose ndine nyaya yangu yandinodawo rubatsiro please musanditukewo nekuti ndirikutotsvagawo kuziva. Ndakaroora last year and I am...
Tete Vee - September 17, 2020
Tete Vee - August 15, 2019
Ask Tete Tete Vee - June 24, 2021
Ask Tete Max - August 15, 2019
Ask Tete Max - January 20, 2019
Ask Tete Max - January 3, 2019